1-Click PC Care Ndenye Malite Guide
Nke a ndu ga-egosi gị otú ị na-akụ elu PC. Mfe-iji na onye ọrụ-enyi na enyi interface ka ị na-akụ elu PC na nanị 1 Pịa.
1-Pịa PC Akụ Up
Ẹkedori software, na ọ na-amalite ịgụ isiokwu gị PC ọmụma-akpaghị aka. A zuru ezu Rolling ịlele akụkọ banyere niile kọmputa mbipụta ga-egosipụta ka ị mara gị PC ọmụma na ọnọdụ ahụ n'oge mbụ.
Pịa 'Idozi Ugbu a', mgbe ahụ, software ga rụchaa akụ elu-akpaghị aka.